Tag: nzaghachi | Martech Zone
Otu n'ime ihe omuma ihe omuma a na-ewu ewu nke anyi biputere bu Uzo iri iji gbanwee ndi nleta na Psychology. Ghọta ihe na-akpali mmadụ ịzụrụ dị mkpa maka ahịa. Ọ bụrụ n’inwere ike ịnye ozi dị mkpa, ịnwere ike imetụta mkpebi ịzụta. Ihe omuma ihe omimi vidio a sitere n'aka ndi dere Ee!: 10 Scientific Proven Ways to Be Persuasive na-enye nghọta n'ime ihe na-akpali anyị ịzụta. Uzo mkpirisi Universal a kọwara na vidiyo bụ mmegwara,
Ana m ele ozi ọma taa ma e nwere ọtụtụ okwu gbasara echiche gbagọrọ agbagọ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana otu esi ewepụta ya wee nyocha ya. Mgbasa mgbasa ozi ka na-ekerekwa òkè dị ukwuu na ntuli aka ahụ, ebe anyị na-ahụ ka a tụbara nde kwuru nde na mgbasa ozi telivishọn. Ọ bụ ntuli aka rụrụ arụ na nke m ga-enwe obi ụtọ ịhụ njedebe nke adịghị anya. Ihe ngosipụta nke mkpọsa ahụ abụwo n'ezie